Izinkinga zezinduna? Ukudla okufanele ukugweme | Bezzia
UToñy Torres | 11/05/2022 20:00 | Amathiphu ezempilo, Ukudla okunomsoco
Uma unezinkinga zezinduna kufanele ukugwema ukusetshenziswa kokudla okuthile okwenza isikhumba sibe sibi kulezi zimo. Kalula nje, konke lokho kudla okunamafutha amaningi nokudla okuthosiwe. Kodwa ohlwini ungakwazi ukwengeza ukudla okungase kubonakale kungenangozi, kodwa izitha ezinkulu zesikhumba esihlushwa yizinduna. Ukudla okunempilo, okuhlanganisa ukudla okuvikela isikhumba futhi okungabandakanyi labo abasilimazayo, kungenye yamathuluzi ayinhloko ekulweni nezinduna.
Kodwa-ke, izinkinga zesikhumba ngokuvamile zibangelwa izici ezihlukahlukene, okudingeka ucele usizo lwabachwepheshe bezempilo. Ngakho-ke, ngaphezu kokuthuthukisa ukudla kwakho ukuze unakekele impilo yesikhumba sakho, kufanele uye ku-dermatologist ukuze akwazi ukuhlaziya kahle inkinga yakho. Kanjalo nje uzothola ukwelashwa okungcono kakhulu kwezinkinga zakho izinduna.
1 Yikuphi ukudla okufanele ukugweme ukulwa nezinduna
1.2 isikhwama ukudla okulula
1.3 ukudla okunamafutha amaningi
1.4 amaswidi agayiwe
Yikuphi ukudla okufanele ukugweme ukulwa nezinduna
Ngaphambi kokuqeda noma yikuphi ukudla ekudleni, kubaluleke kakhulu ukubonisana nodokotela ukuvimbela noma yikuphi ukuntuleka kokudla okunomsoco. Noma yikuphi ukuvinjelwa ngaphandle kokulawulwa kwezokwelapha kungaba yingozi empilweni, ngakho kubalulekile ukulandelelwa kokuqinisekisa ukuthi yonke into ithuthuka ngokujwayelekile. Uma udokotela wakho ekunika ithuba lokuya phambili, ungakwazi ukuqeda ukudla okuthile okwenza induna ibe nzima nakakhulu.
Ukudla okuthosiwe kungenye yezitha ezimbi kakhulu ze-acne, njengoba amafutha amaningi kanye namazinga okushisa aphezulu kakhulu adingekayo ukupheka ukudla okufana nalokhu. Lamafutha ajiya ekudleni, uyiphendule ibhomu ekhuluphele lokho kukwenza uzuze ama-kilo futhi kulabo abanezinkinga zesikhumba, inkinga engathi sína ezoba yimbi kakhulu. Khetha ezinye izindlela zokupheka ezilula, thola i-air fryer futhi udle amafutha omnqumo aluhlaza. Ngakho ungasebenzisa ngokugcwele zonke izinzuzo zalokhu kudla okunempilo.
isikhwama ukudla okulula
Konke ukudla okulula okucutshunguliwe kuqukethe amafutha agcwele ayingozi empilweni ngezindlela eziningi, okuhlanganisa nesimo sesikhumba. Kungakhathaliseki ukuthi ama-chips, izinti noma noma imaphi amafomethi okudla kwesikhwama, umphumela uyafana. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele zisuswe ekudleni kwakho uma uzidla njalo, ngoba isikhumba sakho sizothuthuka ngokuphawulekayo ngoshintsho.
ukudla okunamafutha amaningi
Konke lokho kudla okuqukethe amafutha amaningi akunconywa uma ufuna ukulawula izinduna. Phakathi kwazo kukhona i-chorizo ​​​​kunoma yiziphi izinguqulo zayo, ubhekeni, ibhotela noma yiluphi uhlobo lwenyama enamafutha amaningi. Kungcono ukukhetha imifino, izithelo, amaprotheni anomzimba kanye nemifino, okuzohlinzeka ngokudla kwakho ngezakhi ezidingekayo futhi uzokwazi ukulwa izinkinga zesikhumba.
Amakhekhe ezimbonini akufanele abe yingxenye yokudla kwakho noma ngabe udinga ukulawula izinduna. Lezi zinhlobo zemikhiqizo ziqukethe inani elikhulu amafutha agcwele kanye nezinto eziyingozi empilweni. Ngakho-ke, uma ungafuni ukuyeka i-sweet ngezikhathi ezithile, kungcono ukuyilungiselela ekhaya ngezithako zemvelo.
Ikakhulukazi ama-pizza acutshungulwe kakhulu noma lawo avela ezindaweni zokudlela ezisheshayo. Lo mkhiqizo uqukethe amafutha amaningi kuzithako eziningi ezilungiswa ngazo, ngakho-ke kuba ibhomu elinamafutha angahambisani nokunakekelwa kwezinduna. Uma ufuna ukudla i-pizza ngezikhathi ezithile, kungcono ukuyilungiselela ekhaya ngendlela yobuciko, ukhetha izithako ezinempilo kakhulu.
Ngamafuphi, ukudla okufanele ukuqede ekudleni kwakho ukulawula induna yizo zonke eziqukethe amafutha amaningi futhi, ngamafuphi, kuyingozi empilweni yakho ngazo zonke izindlela. Le mikhiqizo yengeza amakhilogremu engeziwe, ukuvala imithambo futhi kubangele izinkinga zesikhumba njengezinduna. Ngakho-ke, ukuwaqeda ekudleni ngeke kukusize nje uthuthukise induna, kodwa futhi kuzothuthukisa impilo yakho ngokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Izinkinga zezinduna? Ukudla okufanele sikugweme
Ungazi kanjani ukuthi umlingani wakho naye ungumngane wakho omkhulu